Dhamma PaOh for Android
Rated 4.88/5 (8) — Free Android application by Yeaung
About Dhamma PaOh
Dhamma PaOh Application ထွက်လာပါပြီ
Dhamma PaOh Application ကို ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ ထည့်ထားပြီးတော့
အင်တာနက်လိုင်းရှိရုံနဲ့ ပအိုဝ်းတရားတော်များကို အချိန်မရွေးနေရာမရွေး
နာယူလို့ရပါပြီ၊ တရားတော်များကို ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ ဒေါင်းထားပြီးတော့
လိုင်းမဖွင့်ထားလဲ အချိန်မရွေး နာယူလို့ရပါတယ်၊
ပအိုဝ်းတရားတော်ကိုလဲ MP4, MP3 မရွေး MP4 ဖြစ်စေ
MP3 ဖြစ်စေ နာယူနိုင်ပါတယ်။ Dhamam PaOh APP ဆိုပေမဲ့
Zawgyi ဖောင့်ကို အသုံးပြုထားသည်ဖြစ်စေ
Unicode ဖောင့်ကို အသုံးပြုထားဖြစ်စေ Zawgyi & Unicode မရွေး
ဖုန်းအားလုံး ပအိုဝ်းစာဖတ်ကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Dhamma PaOh Application ကိုတော့
https://goo.gl/tD7VNZ နေ တဆင့်လဲ သွားရောက်ဒေါင်းယူနိုင်ပြီး
Play Store တွင်လဲ PaOh ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့သော်၎င်း
Dhamma PaOh အမည်နဲ့ ရှာရင်လဲ တွေ့နိုင်ပါတယ်၊
https://goo.gl/jgkNZi လင့်ကနေတဆင့် သွားပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းထဲကို
Thank to PaOh Developer Khun Htet Naing.
Dhamma PaOh Application ထှကျလာပါပွီ
Dhamma PaOh Application ကို ကိုယျ့ရဲ့ဖုနျးထဲမှာ ထညျ့ထားပွီးတော့
အငျတာနကျလိုငျးရှိရုံနဲ့ ပအိုဝျးတရားတျောမြားကို အခြိနျမရှေးနရောမရှေး
နာယူလို့ရပါပွီ၊ တရားတျောမြားကို ကိုယျ့ရဲ့ဖုနျးထဲမှာ ဒေါငျးထားပွီးတော့
လိုငျးမဖှငျ့ထားလဲ အခြိနျမရှေး နာယူလို့ရပါတယျ၊
ပအိုဝျးတရားတျောကိုလဲ MP4, MP3 မရှေး MP4 ဖွဈစေ
MP3 ဖွဈစေ နာယူနိုငျပါတယျ။ Dhamam PaOh APP ဆိုပမေဲ့
Zawgyi ဖောငျ့ကို အသုံးပွုထားသညျဖွဈစေ
Unicode ဖောငျ့ကို အသုံးပွုထားဖွဈစေ Zawgyi & Unicode မရှေး
ဖုနျးအားလုံး ပအိုဝျးစာဖတျကို ဖတျနိုငျပါတယျ။
Dhamma PaOh Application ကိုတော့
https://goo.gl/tD7VNZ နေ တဆငျ့လဲ သှားရောကျဒေါငျးယူနိုငျပွီး
Play Store တှငျလဲ PaOh ဆိုတဲ့ အမညျနဲ့သျော၎င်းငျး
Dhamma PaOh အမညျနဲ့ ရှာရငျလဲ တှနေို့ငျပါတယျ၊
https://goo.gl/jgkNZi လငျ့ကနတေဆငျ့ သှားပွီး ကိုယျ့ရဲ့ ဖုနျးထဲကို
Download and install Dhamma PaOh version 1.0 on your Android device!
Android package: com.khunyeaung.dhammapaoh, download Dhamma PaOh.apk
Oh snap! No comments are available for Dhamma PaOh at the moment. Be the first to leave one!
PaOh Music — YeaungFree App
Dhamma — Dr. Myo Thet HanFree App